Gudiga UN-ka u qaabilsan cunaqabateynta hubka oo sheegay in Al-Shabaab hub ka hesho Yemen iyo Iiraan – idalenews.com
Gudiga UN-ka u qaabilsan cunaqabateynta hubka oo sheegay in Al-Shabaab hub ka hesho Yemen iyo Iiraan
Kooxda daba galka cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegay inay heleen warbixino ku saabsan in Kooxda Islaamiyiinta Soomaaliya ee Al-Shabaab ay hub ka helaan dowladaha Yemen iyo Iiraan.
Warbixinta Gudigan ayaa ku soo aaday, iyadoo Mareykanka uu dadaal ugu jiro sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, kaasoo dhowaan looga hadli doono fadhi uu yeelanayo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Kooxda daba galka hubka ee Qaramada Midoobey ugu qeybsan cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegaya in hubka ka yimaada Yemen la marsiiyo deegaanada xeebaha ee Maamulada Somaliland iyo Puntland, isla markaana loo gudbiyo Koofurta Soomaaliya.
Diblomaasiyiin magacooda qariyay ayaa u sheegay Wakaalada Wararka ee Reuters in Al-Shabaab ay bilihii la soo dhaafay ay heleen hub fara badan oo ay ku jiraan waxyaabaha qarxa, bambooyin iyo miinooyin iyo gantaalada garbaha laga rido.
Sidoo kale Warbixinta ayaa lagu sheegay in Iiraan ay hubka soo marsiiso Yemen, kaasoo u gacan gala dagaalyahano Islaamiyiin ah, kuwaasoo u sii gudbiya Al-Shabaabka Soomaaliya.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa dhowaan ugu baaqay 15-ka dal ee Golaha Ammaanka inay dib u eegis ku sameeyaan cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay codsatay inay u baahan tahay in Ciidamada dowladda dib u dhis iyo qalab casri la siiyo, si ay ula dagaalamaan Shabaab.
Laakiin xubnaha qaarkood ee Golaha Ammaanka ayaa shaki gelinaya in xilligan la qaado cunaqabateynta hubka, iyagoo ku talinaya in la qafiifiyo kaliya.
Si kastaba ha ahaatee todobaadka soo socda ayaa Golaha Ammaanka uu kulan gaar ah ka yeelan doonaan Arrimaha Soomaaliya, iyadoo si gaar ah loogu eegi doono cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, kaasoo sanadkii 1991-dii ay ku soo rogeen Golaha Ammaanka.
Somaliland oo loogu baaqay inay sii deyso Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Weerar uu fuliyay qof naftii hure ah oo ayaa ka dhacay magaalada Galkacyo